तीतो मीठो | गृहपृष्ठ | Page 6
नेपालमा गोयबल्सका पनि गुरू जन्मिइसकेका छन् । गोयबल्स अर्थात् हिटलरका सबैभन्दा प्रिय पात्र र सन् १९३३ देखि १९४५...
हाम्रो देशको माटोमा गणतन्त्रको युरिया पर्‍या मात्र के थ्यो, यी तीन चीज खूब फुल्न थाल्या छन्– दलाल, गुन्डा र ने...
‘अब सडकमा जहाज बस्छन् । टुँडिखेलमा तरकारी रोपिन्छ । पहिले पोखरीहरू फुटबल ग्राउन्ड बन्नेवाला थे । अब फेरि पोखरी...
on: June 22, 2018 तीतो मीठो
हाम्रा पर्धानमन्त्री साह्रै बाठा पो छन् त । उनी रेल ल्याउन चाइना गा’छन् । ७ वर्षपछि आउँछ रे चीनबाट रेल । रेल अर्थात् समृद्धि । अघिल्लो महिना उनी पानीजहाज ल्याउन भारत गा’थे । पानीजहाज याने वि...	बिस्तृतमा
on: June 15, 2018 तीतो मीठो
विश्वकप फूटबलको ज्वरोले विश्वका मानिसलाई हिजोदेखि राम्रै समातेको छ । नेपाल यसबाट अछूतो रहने कुरै भएन । गत १ हप्तादेखि नै के शहर के गाउँ, सबैतिर फूटबल जर्सीमय देखिन थालेका छन् । शहरका कपडा पस...	बिस्तृतमा
on: June 08, 2018 तीतो मीठो
वातावरणमन्त्री कसको गाडीमा धूवाँ आइरा’छ भनेर निरीक्षण गर्न व्यस्त छन् । गृहमन्त्री ठेकेदारहरुलाई समाउँदै थुन्दै छन् । आपूर्तिमन्त्री किसानको पैसा तिर् भन्दै चिनी मिल मालिकलाई थर्काउँदै छन् ।...	बिस्तृतमा
सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने थियो, ल्यायो । विपक्षका लागि यो हावादारी भयो, पक्षका लागि हाहाकारी । प्रदेश सरकारहरुले यो बजेटलाई प्रदेशका लागि नभई सङ्घका लागि मात्र भयो भन्ने आरोप लगाए । यो बजेट...	बिस्तृतमा
दुई तिहाइको वाम सरकारले बजेटअघि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम (नीका) ल्याएको मात्र के थियो, विरोधीहरूले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न धुँवाधार विरोध शुरू गरिहाले । विरोध नगरून् पनि किन ? किनकि त्...	बिस्तृतमा
on: May 18, 2018 तीतो मीठो
मोदी आए, गए । हामी नेपालीलाई एक महीनाको गफ गर्ने खुराक पुगिहाल्यो । मोदीले पनि गफै गरेका हुन् । हाम्रा नेताले गर्ने पनि गफै हुन् । पहिलेकै पूरा भएका छैनन् वाचाहरू । कति थपिएका छन् नयाँ नया प...	बिस्तृतमा
आज मोदी आउने रे । आश्वासनका पोका ल्याउने रे । नागरिक अभिनन्दन हुने रे । उनले पनि नेपालीजनका मन छुने रे । लौ है, हाम्रा लागि नभए पनि अतिथिका लागि शहर, मन्दिर सफा राख्नू । सडक खुल्ला राख्नू ।...	बिस्तृतमा
on: May 04, 2018 तीतो मीठो
पूँजीवाद अर्थात् क्यापिटलिजम वा बजार अर्थतन्त्र । यस्तो अर्थतन्त्र जहाँ क्यापिटल गुड्स व्यक्ति वा प्राइभेट व्यावसायिक संस्थाहरुको स्वामित्वमा हुन्छ । सामान तथा सेवाको उत्पादन बजारको आवश्यकता...	बिस्तृतमा
गणतन्त्र दिवसमा रात्रिभोज !
on: April 27, 2018 तीतो मीठो
हालै सरकारले थुप्रै सार्वजनिक विदा कटौती गर्‍यो, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, नागरिक सेवा दिवस आदि । विदा नभएपछि यी सबै दिनमा अफिस खुल्छन् । तर, दिवसका औपचारिक कार्यक्रम अर्थात् समारोह च...	बिस्तृतमा
हिजोआज जो पनि सरकारलाई थर्काउन खोज्छन् बा ! हुँदाहुँदा ड्राइभर र खलासीसम्मले पनि थर्काउन थालेका छन् । चिया पसलदेखि फेसबुक, ट्वीटरका वालसम्ममा सरकारले यो गर्नुपर्छ वा त्यो गर्नुपर्छ भनेर थर्क...	बिस्तृतमा